Aiza ny tsidihin'ny mpitsidika bilaogy? | Martech Zone
Efa elaela izahay no niasa tamin'ny kinova Martech vaovao. Mbola manana sakana sasantsasany tokony hihoarana isika rehefa manova ny layout ankehitriny ho lasa layout mifampiresaka kokoa izay mora ampiasaina amin'ny mpivarotra mba hikarohana sy hikaroka ny fividianana haitao manaraka.
Iray amin'ireo fitsapana lehibe nataonay ho fanomanana ny fanesorana ny endrika fikarohana ao anatiny (notsapainay ny fikarohana WordPress sy ny fikarohana nataon'ny Google) ary nosoloinay Algolia, fikarohana iray ho toy ny vahaolana amin'ny serivisy izay manome topy maso ny sary na autosuggestions. Ho hitanao eto ambany fa mpandresy ny hetsika - mamokatra firotsahana bebe kokoa, mampitombo ny fijerinay pejy isaky ny mitsidika, ary mampihena ny tahan'ny fiakarana.
Ankoatry ny fampiasana Analytics, zava-dehibe ny hanarahanay ireo toerana nisafidianan'ireo mpampiasa anay sy hanomezana antoka fa tena nampiasain'izy ireo ny boaty fikarohana anay. Ho amin'izany, nanoratra ny fampiasana ny Crazy Egg. Crazy Egg dia manome sary tsy manam-paharoa efatra azonao atao amin'ny pejy rehetra amin'ny tranokalanao - ary koa ny fotoana hizaha toetra ny fifandraisana amin'ny finday koa.
Overlay atody adala
Heatmap atody adala
Ity dia fampisehoana mpitsidika vaovao (mena) mifanohitra amin'ireo mpitsidika (fotsy) miverina. Ireo tatitra confetti koa dia hanaparitaka ny mombamomba ny finday, tablette, système d'exploitation.
Scrollmap atody adala
Manana asa vitsivitsy hatao amin'ity iray ity isika - hita fa tafiditra ny lahatsoratray voalohany, saingy tsy hitan'ny mpitsidika ny antony manery azy hikorisa. Hiezaka izahay amin'ny fanomezana tsanganana amin'ny fampahalalana bebe kokoa sy ny famakiana sokajy lahatsoratra vaovao.
Tags: algoliafikarohana ao amin'ny bilaogytsindrio overlaysari-tany confettiatody adalacrazyeggheatmaptakelascrollmapSearch Marketingmaso fikarohana
Ny asa avy any an-trano Neny
11 Nov 2007 tamin'ny 3:55 PM
Ny fanehoan-kevitra dia iray amin'ireo singa mahatonga ny bilaogy hahomby tokoa nefa matetika no ahitanao ny olona mamono ny fanehoan-kevitra na tsy mamporisika ny mpitsidika hanome hevitra fotsiny. Azo antoka fa hahazo spam kely ianao, saingy misy plug-in spamming fanehoan-kevitra tsara izay mety amiko.
Mieritreritra aho fa nanandrana nametraka Crazy Egg tany aoriana kely nefa tsy nanam-bintana, mety ho fotoana hananana lalana hafa heveriko.
11 Nov 2007 tamin'ny 6:26 PM
Marina izany! Nanao fanadihadiana momba ny fanehoan-kevitra aho ary misy vokany eo amin'ny bilaogiko izany ary nahita ny fanehoan-kevitra no fitaovana tokana lehibe indrindra nahasarika ny mpamaky.
Nanandrana nametraka ClickHeat aho ary tsy afaka niasa fa CrazyEgg toa tsara.
14 Nov 2007 tamin'ny 9:22 PM
Misaotra anao nandefa ity fampahalalana ity. Handinika an'i Crazy Egg aho. Eny, ekeko fa tena mahaliana ny mahita hevitra ao amin'ny bilaogy. Tsy nieritreritra momba izany tamin'ny bilaogiko manokana mihitsy aho taloha. Aza mitsahatra mandefa fampahalalana tsara izay tena manampy ny hafa!